Ịmụta: enweghi ike ịṅụ ọgwụ ọjọọ. | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Learning Na-agụghị akwụkwọ
"Ndị na-agụghị akwụkwọ nke narị afọ 21st agaghị abụ ndị na-enweghị ike ịgụ ma dee, ma ndị na-enweghị ike ịmụta, agụghị akwụkwọ ma degharịa."
- Alvin Toffler, ọdịnihu (Toffler, A. 1970 “Shock Future”), omlọ Random
Nlekọta na ihe riri ahụ na-emetụta àgwà ọjọọ. N'inye ihe anyị maara banyere nyocha ahụ, enwere olileanya na anyị nwere ike ịmụta àgwà ndị na-enyereghị anyị aka. Ọ bụ ezie na map ụbụrụ anyị kere adịghị apụ apụ n'ezie, ha nwere ike belata site na-ejighị ya. Ilebara anya na ịzụlite àgwà ọhụrụ bụ obere ihe dị ka ịgbara mmiri ọhụrụ na ịhapụ ndị ochie ka akpọnwụ. Ọ na-ewe oge na mgbalị siri ike iji gbanwee omume dị ka ihe ncheta nke obi ụtọ na ihe ndekọ ndị na-ebute ihe ncheta ndị ahụ na-anwa mgbe niile iji nwaa anyị. Site n'inwe ihe ọmụma na nkwado, anyị nwere ike ime mgbanwe dị ukwuu.
Ịghọta Ụdị Nri Ahụ-Otu Onye Mbụ nke "Nrịanrịa bụ ọrịa mbụ, ọrịa na-adịghị ala ala nke ụbụrụ ụgwọ, mkpali, ncheta na mgbakọ yiri nke a ..." bụ nnukwu ọganihu ma nwee ike inye aka wepụ nsogbu ahụ na-ejikarị na-eri ahụ n'oge gara aga ka ụfọdụ ụdị omume rụrụ arụ ma ọ bụ adịghị ike. Ọ na-enyere anyị aka inwe uche dị iche iche nke ihe ndị dị mkpa nke ịntanetị nke nwere ọtụtụ ndị mmadụ. Echiche ọma kachasị na ụlọ ọrụ IT na mgbasa ozi na-ahụ nke a.
Eziokwu ahụ bụ na ahụ riri ahụ bụ usoro, omume a mụtara, nwere ike ime ka anyị mara ụzọ mgbapụta tupu anyị, ma ọ bụ ndị nọ anyị nso, na-ezipụ na njikwa, dịka ụzọ azụ pụrụ isi ogologo ma sie ike.
Akụkọ banyere frog bụ ihe enyemaka bara uru ebe a. Akụkọ ahụ na-aga na ndị na-eme nnyocha na-etinye frog n'ime mmiri ọkụ. Ọ na-apụta ngwa ngwa, ihe nchịkwa ya na-eme ka ọ mara ihe ize ndụ ahụ. Mgbe ha na-etinye frog n'ime mmiri oyi, ma na-eme ka ọkụ ahụ jiri nwayọ nwayọọ nwayọọ, mmiri ahụ na-acha ọkụ ma nwụọ. Mmiri ahụ na-amawanye ụba na ọkụ na nrụgha aka ya na-abaghị uru n'ịzọpụta ndụ ya. Nke a nwere ike ime onye ọ bụla ma ọ bụrụ na anyị echefuo ihe egwu na nzaghachi nrụgide anyị anaghị egbochi anyị.
<< Mkpakọrịta nwoke na nwanyị na mmalite mmekọahụ Ahụike Intanet >>